Haddii aad ku aragto 7-dan calamood ee xayawaankaaga, wac dhakhtarkaaga degdega ah ASAP
Bogga ugu weynEeyaha DaryeelHaddii aad ku aragto 7-daan calamood oo ku yaal xayawaankaaga, wac xaalad degdeg ah...
Eeyaha DaryeelEeyaha Caafimaadka
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Janaayo 19, 2022 Eeyaha Vets
1. Indhaha caabuqa
2. Qaniinyada nabarrada ama xagashada
3. Dhaawacyo naxdin leh
4. Matag ama shuban
5. Neefsashada oo ku adkaata
6. Ku mergada
7. Cunista walxaha waxyeelada leh
Haddii aad tahay waalid dhogorta cusub, qaar ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaad hore u ogaato waa wax kasta oo ku lug leh xaaladaha degdegga ah.
Hubaal, waa inaad taqaan waxa la sameeyo inta lagu jiro xaaladahan. Laakiin waxaa ka sii muhiimsan, waa inaad barataa sida loo garto xaaladaha degdegga ah marka hore.
Hoos waxaa ku yaal calaamado sheeko-sheeko ah oo sheegaya in xayawaankaagu uu u baahan karo daryeelka degdegga ah ee vet si degdeg ah.
Casaanka isha waxaa inta badan u qaata qaar ka mid ah milkiilayaasha xayawaanka. Taas oo aan ahayn in ay dhacdo.
Haddii aad aragto guduud aad u daran indhaha xayawaankaaga, waa inaad sida ugu dhakhsaha badan u hubisaa iyaga. Gaar ahaan haddii uu jiro dheecaan xad dhaaf ah oo ka soo baxaya indhaha.
Calaamad kale oo muujinaysa inay wax ka khaldan yihiin indhaha xayawaankaaga rabaayada ah waa marka ay sii wadaan inay indhahooda ku xoqaan ama ku xoqaan roogga.
Haddii aad leedahay bahal ama xayawaan kasta oo leh indho muuqda, waa inaad aad uga taxadirtaa iyaga maadaama ay aad ugu nugul yihiin caabuqa isha cherry.
AKHRI: Heelers Texаs ma wax bay leeyihiin? 10 Waxyaabood oo laga Ogaado Eeyaha Texas Heeler
Mar kasta oo aad u ogolaato xayawaankaaga rabaayada ah inuu la ciyaaro xayawaanka kale, waa inaad ka taxadartaa xayawaanka kale ee bilaabay inay u dagaallamaan xayawaankaaga.
Qaniinyada ciyaartu waa qabow. Si kastaba ha ahaatee, waxaa had iyo jeer jira hal xayawaan ah oo aan xakameyn karin xooggiisa oo ku dhammaanaya inuu waxyeeleeyo xayawaanka kale. Waana inaad ka digtoonaato xayawaankaas. Haddii aan si degdeg ah loo joojin, qaniinyada gardarrada leh waxay keeni kartaa nabar iyo nabar.
Haddi ay taasi dhacdo, wac ambalaasta dhakhtarka xoolaha si aad isla markaaba caawimo u hesho. Gaar ahaan haddii aad dibadda joogto oo aanay jirin qalab gargaar degdeg ah oo diyaar ah.
Haddii fursad kasta oo aad awooddo inaad gacanta ku dhigto xirmada gargaarka degdegga ah, hubi inaad cadaadis saartid nabarka adigoo isticmaalaya faashad faashad nadiif ah ama maro si aad u joojiso dhiigbaxa inta gargaarku ku jiro jidka.
Tani waa wax maskaxiyan ah. Marka aad ogaato in xayawaankaaga rabaayada ah uu dhaawacmay, jawaabtaada tooska ah waa in aad wacdo ambulaanska xoolaha ama dhakhtarkaaga degdega ah.
Wax badan bay ku caawin doontaa haddii aad taqaan sida loo sameeyo gargaarka degdegga ah markaa iska hubi inaad barato gargaarka aasaasiga ah ee xayawaanka rabaayada ah. Sidan, waxaad ka caawin kartaa xayawaankaaga inuu maareeyo xanuunka oo aad yareyso waxyeelada inta caawintu ku socoto.
AKHRI: Muxuu Eeygu U seexdaa Wax Badan? 5 Sababood
Waxa ka sii muhiimsan, waa inaad aad uga taxadartaa eeyahaaga ama bisadaha. In kasta oo ay ka mid yihiin xayawaanka ugu xariifsan, haddana ma garanayaan khataraha dibadda ee iska hubi inaad iyaga raadiso.
Sidan, waxaad ka fogaan kartaa ama yareyn kartaa dhaawacyada xayawaankaaga rabaayada ah.
Haddii aad aragto xayawaankaaga oo si lama filaan ah u matagaya, ama haddii ay jiraan wax is-daba-marin ah oo ku jira xawayaanka, hubaal waxaa jira wax qalad ah xayawaankaaga. Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay xaalad hoose ama cudur. Taasi waa sababta ay tahay inaad si degdeg ah u ogeysiiso dhakhtarkaaga oo aad ballan u qabsato la tashi.
Waxaad ogaan kartaa haddii xayawaankaagu uu la kulmo neefta oo gaaban haddii uu si degdeg ah ugu neefsado qufac, ama haddii midabka carrabkiisu isu beddelo buluug, cawl, ama cirro.
Haddii aad calaamadahan ku aragto xayawaankaaga rabaayada ah, gargaar degdeg ah u codso. Tani waxay noqon kartaa sababtoo ah xaalad hoose sida oof wareenka, cudurada wadnaha, ama neefta.
Wac dhakhtarkaaga xoolaha oo ballan la tashi sida ugu dhakhsaha badan.
Waad og tahay in xawayaanka, gaar ahaan eyda, ay jecel yihiin inay ruugaan wax kasta oo ay gacmahooda ku heli karaan. Taasi waa sababta ay aadka ugu nugul yihiin inay ku mergadaan ama ay qaataan walxaha waxyeelada leh.
Haddii aad u malaynayso in xayawaankaagu uu wax ku merganayo, hubi inaad u keento xayawaankaaga xayawaanka ah dhakhtarka degdega ah isla markiiba.
Waxaad isku dayi kartaa in aad laftaadu soo saarto shayga haddii aad u malaynayso in lagu soo celin karo laba-geesood. Laakiin haddii shaygu aanu muuqan, waa inaad u daysaa khubarada.
Si aad uga fogaato xaaladahan oo kale, iska hubi inaad ka fogaato waxyaabaha yaryar xayawaankaaga si aanay ugu damcin inay ku ciyaaraan oo aanay ku calalin.
AKHRI: Sida Loo Doorto Inta u dhaxaysa Korsashada iyo Iibsashada Ey
Waxaa jirta sabab ay alaabooyinka qaarkood ugu leeyihiin calaamado digniin ah oo leh "ka fogow carruurta" sababo muuqda dartood. Alaabooyinkani waxay khatar ku yihiin carruurta marka la nuugo.
Waa isku shay xayawaankaaga. Waxa jira badeecooyin ama cunto gaar ah oo ay tahay in aad ka fogaato in xayawaankaagu uu gaaro.
Hoos waxaa ah walxahan:
Cuntooyinka leh xylitol
Canab ama sabiib
Dhirta kale sida ubaxshooshannada
Hubi inaad kuwan ka fogayso xayawaankaaga rabaayada ah si aad uga fogaato xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka maadaama ay si dhakhso ah halkaas uga tagi karaan koonfurta.
Laakin haddii ay taasi dhacdo (ku dhufo alwaax), isla markiiba wac dhakhtarkaaga xoolaha oo talo weydiiso.
Views Views: 2,363
article PreviousSida Loogu Helo Xayawaanka Xoolaha Ugu Wanaagsan
Next articleSida Looga Hortago Walaaca Kala Tagga Xayawaankaagu (2022)
Osteoarthritis ee Eyda: 5 Calaamadood iyo Ikhtiyaarada Daawaynta
7 shay oo aad ka ogaan karto CareCredit ee xayawaanka rabaayada ah (Sidee u shaqeysaa?)
10ka Heerkulbeeg ee Eyda ugu Fiican Marka loo eego Dhakhaatiirta Xoolaha ee Xayawaanka (2022)
Sida qabowgu aad ugu qaboow eyda, laga hadlay oo la sharaxay 